MultiTail - နှစ်၊ သုံးခုနှင့်အထက်မှတ်တမ်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြည့်ပါ Linux မှ
ဆာဗာများကိုစီမံခန့်ခွဲသူများသို့မဟုတ်အချို့သော system log များကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၊ ဤအသုံးပြုသူများသည် tail command ဆိုတာဘာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင် log ရှိလျှင် Apache ကို/Nginx ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဝက်ဘ်မေးလ်မှတ်တမ်း (webmail.fromlinux.net ဥပမာအား) ငါတို့နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏ iRedMailသို့မဟုတ်အခြားဝဘ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များမှအခြား www.GmailInicioSesion.info u API ကိုသုံးသောအခြားသူများသငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရှိတဲ့အခါ
မှတ်တမ်းများနှင့်ကျွန်တော်အချို့တိကျတဲ့ command ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချင်တယ် အမြီး ကသံသယမရှိဘဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 အမြီးနှင့် CCZE
3 MultiTail တပ်ဆင်ခြင်း
အမိန့် အမြီး parameter သည်ဘေးတွင်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည် -f ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား real log ကိုပြသသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ log ပြန်လည်ရရှိခြင်းသည် log ကိုပြန်ဖွင့်စရာမလိုပဲ၊ ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ccze (ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောဆိုပြီးပြီ) ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်တမ်းများတွင်အရောင်များကိုထည့်နိုင်သည်။
[မှတ်စု] အရောင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန် ccze package ကိုသင်တပ်ဆင်ရမည် [/ note]
ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မှန် log တစ်ခုပြလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်မှတ်တမ်းနှစ်ခုကိုကြည့်လိုပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ထို့နောက် terminal နှစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး tailf -f တစ်ခုစီကိုတစ်ခုချင်းစီအလျားလိုက်၎င်းတို့ကိုအလျားလိုက်စီပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် logs နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, multitail နှင့်အတူငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှုပ်ထွေးရန်မလိုအပ်ပါ။
MultiTail ဆိုတာ package တစ်ခုဖြစ်ပြီး command တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူမြင်ချင်တဲ့ logs တွေကိုပြောခွင့်ပြုပေးတယ်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကို screen ပေါ်မှာပြထားတယ်။
multitail /var/log/auth.log /var/log/kernel.log
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း၊ တစ်ခုကအောက်က၊ နောက်တစ်ခုက၊ terminal မှာတူညီတဲ့ terminal မှာငါတို့မှာ logs နှစ်ခုရှိတယ်။
ငါနှစ်ခု logs ပြောပေမယ့် ... ပိုပြီးရှိနိုင်ပါသည်ဥပမာ, ငါသည်လည်း ulogd.log log ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့:
multitail /var/log/auth.log /var/log/kernel.log /var/log/ulogd.log
Terminal ကိုအလျားလိုက်မဟုတ်ဘဲဒေါင်လိုက်ကိုပိုင်းခြားချင်ရင်၊ -s2... ကိုထည့်ရမယ်၊2ကစုစုပေါင်းဒေါင်လိုက်ပြားအရေအတွက်။ ဥပမာ:
multitail -s2/var/log/auth.log /var/log/kernel.log
အကယ်၍ ... အကယ်၍ သင်သည်ဥပမာ ၃ ခုနှင့်နှစ်ခုကိုမဟုတ်ဘဲ log ၃ ခုကိုပြချင်သော်လည်း terminal ကိုတန်းတူဒေါင်လိုက်နေရာများသုံးခုခွဲရန်မလိုတော့ဘဲ၊ မှန်areaရိယာကိုအလျားလိုက်နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲရန်2ကိုထားခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် command ကိုသုံးပြီးအဆုံးမှာနောက် log တစ်ခုထပ်ထည့်ပါ။
multitail -s2/var/log/auth.log /var/log/kernel.log /var/log/ulogd.log
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်ကိုရှာဖွေပြီးထည့်သွင်းပါ အစုံ သင့်ရဲ့ repository ကို၌တည်ရှိ၏။
သင် Debian, Ubuntu သို့မဟုတ် derivative ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက -
အကယ်၍ သင်သည် ArchLinux သို့မဟုတ် pacman ကိုသုံးသောအခြား distro ကိုအသုံးပြုပါက:
sudo pacman -S multitail
ရွေးချယ်စရာတွေ၊ command ကွပ်မျက်မှုစတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အစုံ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများကိုတစ်ချိန်တည်းကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းသည်မှာသေချာသည်။
ဒါကိုစိတ် ၀ င်စားကြောင်းသင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » MultiTail - တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်မှတ်တမ်းနှစ်ခု၊ သုံးခုနှင့်ထို့ထက်ပိုသောမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ပါ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ငါသူ့ကိုမသိဘူး 🙂
၎င်းသည် terminal ကိုပစ်ချလိုက်သော command တစ်ခုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကွဲပြားသောအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြသသည်။
ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့ Linux နဲ့ပတ်သတ်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အရောင်အားလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Terra Terminal၊ ၎င်းသည် screenshot ပေါ်ရှိအစီအစဉ်၏အမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ငါ RatPoison interface ကို Debian ဆီမပို့တော့ဘူး။
ငါမသိသောတစ် ဦး ကအလွန်အသုံးဝင်သော tool ကို။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ။ ရွှင်လန်း!
အခု Facebook ကသင့်ရဲ့ SMS / MMS ကိုလည်းဖတ်နိုင်ပြီဆိုတာသင်သိပါသလား။